FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA AFGHAN HOUND - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Afghan Hound
Teddy the Afghan Hound amin'ny 18 volana
Malagasy bulldog pitbull afangaro eo ho eo ny habeny
Greyhound Atsinanana / Greyhound Persia
Ny Hound Afghan dia heverina ho fahitana aristokratika. Lava sy manify miaraka amin'ny loha lava, tery, voadio, tampon-landy ary valanoranom-pahefana mahery vaika, ny faritra aoriana amin'ny loha sy ny karan-doha dia malaza. Somary miavona ilay vavony ary mainty ny orona. Ny Afghanistan dia tsy dia mijanona kely na tsy misy fijanonana, izay ny faritra misy ny tetezamita hatrany am-piandohana ka hatrany amin'ny vava. Ny nify dia tokony hihaona amin'ny ambaratonga na manaikitra ny hety. Ny maso maizina dia miendrika almond. Mandry eo an-doha ny sofina. Lava sy matanjaka ny hatoka. Ny hahavony amin'ny malazo dia tokony ho saika haavo ary voahidy tsara ny kibony. Misongadina ny valahana. Ny tongotra eo anoloana dia matanjaka sy mahitsy ary ny tongotra lehibe sy rakotra volo lava. Ny rambo dia manana curl na peratra eo amin'ny tendrony, saingy tsy entina any ambadika. Ny palitao lava, manankarena ary landy dia matetika ny lokon'ny fasika misy endrika maizim-bolo sy sofina, na dia avela daholo aza ny loko rehetra. Ny marika fotsy kosa dia kivy.
Be herim-po, mendri-kaja, be fanahy, tena mamy, tsy mivadika, be fitiavana ary mora tohina, ambany ny fanjakan'ny Afghana, mety ho somary tsy mitokantokana izy, mifanerasera tsara . Tokony hofanina amin-katsaram-panahy izy ireo amin'ny fomba milamina sy hentitra. Ny Afgàna dia nofaritana ho 'mpanjaka alika' - mendri-kaja, manan-kaja sy kanto. Mampiahiahy an'ireo tsy fantany izy ireo, fa tsy mankahala. Na dia mafy aza izy ireo dia hipoitra raha tsy manana fitarihana malefaka araka ny tokony ho izy. Hanao ny tsara indrindra izy ireo amin'ny ankizy lehibe sy be fiheverana izay mahatakatra ny fomba tokony halemy fanahy mpitarika fonosana . Soa amin'ny fampiofanana sy ny fifehezana izy ireo tsy manoa raha tsy omen'ny tompony torolàlana mazava tsara sy mifanaraka amin'ny antenain'ny alikany ny tompony. Ity karazana ity dia mety ho sarotra amin'ny famaky trano. Izy io koa dia mety ho saro-kenatra sy avo lenta raha tsy mandray ampy fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana .
Haavony: Lahy 27 - 29 santimetatra (68.58 - 73.66 cm) kely kokoa ho an'ny vehivavy.
Jack Russell Basset nanenjika Mix
Lanja: 50 - 64 pounds (22 - 34 kg)
Salama amin'ny ankapobeny.
Ny Hound Afghana dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary manao ny tsara indrindra amin'ny velarantany. Ity karazana ity dia afaka miaina na ivelan'ny trano, na dia mety ho matory ao an-trano aza izany.
Ny Hound Afghan dia mila raisina a mandeha an-tongotra na jogging isan'andro . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ny alika tsy mahazo mandeha an-tongotra isan'andro dia toa mampiseho olana amin'ny fitondran-tena. Ampianaro izy ireo hiditra sy hivoaka ny varavarana sy ny vavahady aorian'ny olombelona. Hahafinaritra azy ireo ihany koa ny mihazakazaka afaka amin'ny toerana malalaka, voafefy, azo antoka.
ny fomba hanehoana ny alika Izaho no Alfa
Ankizy 1 - 15, eo ho eo 8
Ny palitao lava sy matevina dia mitaky fiheverana lehibe. Sasao ny alika rehefa ilaina. Aza miborosy eo anelanelan'ny fandroana mba hitazomana ny akanjo lava sy mamirapiratra. Ny fanosorana palitao maina dia hanimba ny palitao ary hahatonga azy io ho mora matotra kokoa aza. Ny fandroana isan-kerinandro dia tsy dia zava-dehibe loatra raha biby fiompy ny Afganao ary tsy haseho azy, fa ny fanaovana izany dia hahatonga ny palitao ho tsy matotra kokoa ary hamonjy anao fotoana amin'ny farany. Betsaka ny manao snood any an-trano mba hiarovana ny sofiny amin'ny lovia sakafo. Ny tompona sasany dia tia mampiasa borosy vita amin'ny rivotra manokana antsoina hoe pinbrush. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Alika taloha kanto sy kanto ity, teraka tany Sinay, ary niresaka imbetsaka tao amin'ny papyrus egyptiana ary koa sary tao amin'ny lava-bato avaratr'i Afghanistan efa 4000 taona lasa izay. Voadio nandritra ny taonjato maro ny karazany, ary voarara hatrany ny fanondranana azy. Tonga tany Eoropa fotsiny izany noho izany contraband tany am-piandohan'ny taona 1900. Mpihazakazaka haingam-pandeha sy mailamailaka tokoa, ny Afghanistan dia mpitsangatsangana, izay midika hoe mihaza amin'ny fahitana izy. Izy io dia nampiasaina ho mpiandry ondry ary ho mpihaza karazana lalao maro toy ny serfa, osy dia, leoparda ary ny amboadia. Nampiasain'ny mpiandry ondry ho mpiandry sy mpiambina koa izy ireo. Miaro amin'ny fiakaran'ny maripana ny palitaony matevina. Any Eropa sy Amerika dia lasa biby fiompy mahafinaritra sy alika mampiseho alika noho ny hatsaran-tarehy aristokratika izy ireo. Ny sasany amin'ireo talentan'ny Afgana dia ny fihazana, ny fahitana, ny fanarahan-dia, ny fiompiana, ny fiambenana, ny hazakazaka ary ny fisokafana.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Hound Afghan
Afghan Hound Sary 1
Afghan Hound sary 2
Afghan Hound: sary an-tsokosoko voaangona
orona manga amerikana staffordshire terrier
Zavatra tendrombohitra alika mpiandry ondry bernese alika kely
sarin-tsondro amin'ny alika
Vaovao madagascar cavalier king charles